UNgubane uthi ihhovisi likaMgcinimafa limosha izimali zomphakathi ngophenyo | News24
UNgubane uthi ihhovisi likaMgcinimafa limosha izimali zomphakathi ngophenyo
Cape Town – USihlalo webhodi lakwa-Eskom uBen Ngubane ugxeke iHhovisi likaMgcinimafa ngokumosha imali yabakhokhi bentela ngokwenza kwalo uphenyo ngezinkontileka zezinkampani zamalahle.
UNgubane uthe imali emoshwe yihhovisi likaMgcinimafa ingaphezulu kwengxenye yesigidi zamarandi.
U-Eskom nehhovisi likaMgcinimafa sekunesikhathi belokhu bengaboni ngasolinye, kulandela izinsolo zokuthi abakwa-Eskom abafuni ukuveza imiqulu ukuze uMgcinimafa ezohlolisisa izinkontileka zezinkampani ezihlinzeka u-Eskom ngamalahle.
NgoLwesibili, uNgubane utshele iStanding Committee on Public Accounts (Scopa) ePhalamende ukuthi uma zingasayinwa ‘ngokushesha’ izinkontileka ezintsha ukuze kutholakale amalahle, kungase kuphinde kubenokunqamuka kukagesi ezweni (load-shedding).
OLUNYE UDABA: Kuboshwe 'owadlwengula wabulala' ingane,11
Ihhovisi likaMgcinimafa lithi umbiko wocwaningomabhuku owenziwa yiPricewaterhouseCoopers wango-2016 liwubone kulo nyaka, futhi u-Eskom ucele ukuba kucwaningwe amabhuku ngo-2015 usuwazi vele ukuthi uMgcinimafa useqalile ukwenza okufanayo.
Lokhu ihhovisi likaMgcinimafa nalo likuchaze njengento eyayingenaso isidingo, okungukumosha izimali.
I-Scopa izohlanganisa umbiko ozwethula ePhalamende uhambisana nezincomo.